IShotgun Shack ❤️ yeMS Delta
Le Shotgun Shack yibhodi yecypress yokwenyani kunye nekhabhinethi ye-batten. Ukwakhiwa kwekhabhinethi kuqale emva ekupheleni kweminyaka yama-20 emva koMkhukula oMkhulu ka-1927. Le khabhin yalungiswa ngokupheleleyo, kwaye inazo zonke izinto eziyimfuneko zokuhlala kamnandi. Ime ngasemva kweBurrus House edumileyo, aka Baby Doll House, kufutshane neBenoit, MS. Incwadi kunye "no-Henry's Shotgun Shack" yamaqela ukuya kuthi ga kwi-8!
Igumbi lokulala libonisa ibhedi epheleleyo kwaye kukho ibhedi ye-queen sofa kwindawo yokuhlala. Kukho imbiza yekofu, ifriji encinci, ioveni yetoaster kunye nemicrowave.
Incwadi kunye "no-Henry's Shotgun Shack" yamaqela ukuya kuthi ga kwi-8!
Ukuseta kwelizwe ngokutshona kwelanga okumangalisayo kunye namava okwenyani eDelta.
Uya kufumana indawo yabucala kwaye ube ziikhilomitha ezingama-20 ukusuka eGreenville, eCleveland, eIndianola, naseRosedale. kunye neekhilomitha ezingama-45 ukusuka eClarksdale naseGreenwood. I-Benoit yiyure ye-2.5 yokuhamba ukusuka eMemphis, eJackson, naseLittle Rock. Kwaye iyure ye-3 yokuhamba ukusuka eNatchez.